Saddex filim oo madow iyo caddaan weyn oo casri ah | Ragga Stylish
Michael Serrano | | dhaqanka, nololeedka
Aflaanta casriga iyo madow ee casriga ahi had iyo jeer waxay halis ugu jiraan in lagu tilmaamo inay yihiin dad sumcad-darro ah. Sababta kale ee looga fekerayo marka la dooranayo qaabkani waa diidmada maqnaanshaha midabada ay ku keento daawadayaal badan.
In kasta oo caqabadaha jiray, filimada soo socdaa waxay soo baxeen wax ka badan nimco. Sababta ayaa ah ha u isticmaalin caddaanka madow hab fudud oo lagu gaaro qiime farshaxan sare. Intaas waxaa sii dheer, sheekooyinkooda quruxda badan waxay ka dhigayaan kuwo u qalma dadaalka in midabka laga daayo saacado kooban.
1 artist The
Waqtiga badan ee la dhaafaa, ayaa si xad dhaaf ah u sii badanaya shanta abaalmarinood ee ay Akadamiyadda Hollywood isaga siisay, oo ay ku jiraan midka ugu fiican filimka sanadka, waxay umuuqdaan filimkan aamusan ee Faransiiska. Si kastaba ha noqotee, taasi macnaheedu maaha inaysan mudnayn in la arko. Waa u qalantaa, iyo wax badan. Waxay matalaysaa waayo-aragnimo ka duwan oo aad u wanaagsan. Iyo isticmaalka madow iyo caddaan gebi ahaanba waa xaq.
Aabe iyo wiilkiisa ayaa safar safar ah ku aaday si ay u dalbadaan hal milyan oo doolar. Si kastaba ha noqotee, taasi waa marmarsiiyo kaliya in miiska la soo saaro arrimo ay ka mid yihiin gabow iyo xiriir waalidnimo. Madow iyo caddaan waxay xooga saareysaa murugada ku jirta astaamaha tan wadada movie ka buuxaan kaftan aan macquul ahayn.
Ku guuleystaha Abaalmarinta Oscar ee Filimkii ugu Fiicnaa ee Ajaanibta ah sanadii 2015, 'Ida' wuxuu na geyn doonaa Poland horaantii 60. Qurux ahaan iyo farsamo ahaanba dhalaal ahaan, sheekadu waxay si xeeladeysan u soo dhawaaneysaa nabarradii uu kaga tagay qabsashadii Jarmalka ee dalka. Oo isagu wuxuu ku sameeyaa iyada oo loo yaqaan 'avice dhalinyaro' oo magaceeda la yiraahdo Anna (oo ay si yaab leh u sameysay atariisho hiwaayad gebi ahaanba ah) oo dooneysa inay ku dhaarto nidarradeeda. Adag, melancholic iyo aad u kooban, oo aan madow iyo caddaan kuma reebi doono aragti noocan ah daawadayaasha. Marar aad u yar oo filim madow iyo caddaan ah ay dhalisay baahida loo qabo in mar labaad iyo mar kale la arko sida 'Ida' oo kale. Loogu yeeray inuu noqdo filim cibaado badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Filimado casri iyo madow ah oo casri ah oo daawasho mudan
Afar sababood oo loogu beddelo surwaal lug ballaaran
Boorsooyinka qaabdhismeedka ugu wanaagsan ee guga